Daawo sawirro: Nin darba-jiifta ugu deeqa kabo ay xirtaan | Radio Himilo
Home / Macluumaad / Daawo sawirro: Nin darba-jiifta ugu deeqa kabo ay xirtaan
Daawo sawirro: Nin darba-jiifta ugu deeqa kabo ay xirtaan
Posted by: radio himilo August 20, 2017
Muqdisho – Dagane ku nool New York, Andre McDonnell wuxuu waqtigiisa nasiinada badi ku qaataa u qeybinta kabo dadka darbi-jiifta ah. Helidda ururkiisa samafalka ee loo yaqaan ‘Its From the Sole,’ deeqsiga 42-jirka ah wuxuu qeybiyay in ka badan 5,000 oo kabo ah wax ka yar saddex sano.
Fikradda Andre waa mid iska fudud: wuxuu ururiyaa kabaha cusub iyo kuwa la isticmaalay, kadibna laftigiisa ayaa nadiifiya. Wuxuu dhabtii toddobaad kasta qarash gareeyaa $50 ilaa $60 si uu kabaha u nadiifiyo. Marka uu kasoo jeesto shaqadaas, Andre wuxuu ku baxaa fagaarayaasha Grand Central Terminal iyo Union Square maalin kasta si uu darbi-jiifta ugu wareejiyo kabihii uu nadiifiyay.
Mar kasta oo uu deeq sameeyo, wuxuu la galaa sawir muujinaya inuu gutay yaboohii loo soo dhiibay. Wuxuuna ugu diraa farriin-danabeed. Wuxuu sidoo kale soo dhigaa bartiisa Instagram-ka. Balse waxa la yaabka ah waa in qaatuhu uusan u arkin tallaabadaas mid igu sawir ah.
Falkiisu wuxuu soo bilowday shan sano kahor, mar uu ciyaaray ciyaarta kolayga. “Waxaan arkay nin dib-jir ah oo kaba la’ waxaana isaga soo baxay ciyaarta. Waxaan u siibay kabahayga, wuuna iga dhaqaaqay isaga oo dhoollaha caddaynaya,” Andre ayaa dib u sharraxay. “Markii aan socod maagay, waxaan xanan iyo xanuun ka dareemay dhulka aan ku socday. Dareenkaas wuu i taabtay. Waxaana ogaaday wax ka badan tallaabadan inaan sameeyo.”
“Waxaan mar kasta ahaa mid u dhimriya darbi-jiifta; marka ay ii sheegaan inay gaajoonayaan, waxaan u wadi jiray maqaayadda – ma siin jirin lacag,” ayuu sii raaciyay.
“Dareenka ugu fiican oo aan ku saacidi karo waa iyaga oo sita kabahii aan ugu deeqay. Waan ogahay inay qiimeynayaan siintan. Laakiin waxay noloshooda u fududeynaysaa inay si walwal la’aan ugu dhaqaaqaan danahooda.”
Andre wuxuu ku qeexay magaca ururkiisa mid u taagan; ‘Yabooh qalbi naxariis ka yimid kuna socda lugo u nuglaaday socodka.” Wuxuu dadaalkiisa ku baahiyay meelo badan oo Maraykanka ah iyo xattaa Paris. Wuxuu sidoo kal ku gaaroobay ku deeqista cunnooyinka, dharka iyo wixii la halmaala. Hal-ku-dheggiisu waa “Inta yar ayaa tirsamaysa.”
Previous: Bisadda ugu xanaaqa badan internet-ka.
Next: Muslim faqiir ah oo si yaab leh kaga mid noqday Xujeyda sanadkan.